को CPU तापमान तपाईं कसरी थाहा छ?
लगभग सबै प्रयोगकर्ताहरू व्यक्तिगत कम्प्यूटर घटक को तापमान निगरानी गर्न आवश्यकता सजग छन्, विशेष गरी "हृदय" - को CPU। यो राम्रो तात्दै पीसी मा अस्थिरता को मुख्य कारण मध्ये एक, र यसको हार्डवेयर को विफलता लागि preconditions को पनि उद्भव, त्यसैले CPU तापमान सबैलाई उपयोगी हुनेछ सिक्न कसरी जानकारी छ कि ज्ञात छ। विशेष गरी यो पक्ष, यो सबै भन्दा आधुनिक कम्प्युटर टिप्पण लायक छ, यो थप साधारण बन्ने छ - ल्याप्टप। कि ल्याप्टप मा सबै घटक आपसमा एकदमै नजिक स्थित हो, र किन निर्माताहरु सधैं पर्याप्त गर्मी अपव्यय प्रदान गर्न काम छैन छ जो अत्यन्तै संकुचित कम्प्युटर, शरीर अनिवार्य सञ्चालन समयमा चिप्स विकसित तथ्यलाई। निम्न कार्यक्रम सबैलाई कसरी बुझ्न अनुमति दिन्छ प्रोसेसर तापमान सिक्न व्यक्तिगत कम्प्युटर, साथै पत्ता लगाउन कसरी बुझ्न प्रोसेसर को तापमान ल्यापटप।
तसर्थ, प्रोसेसर को तापमान निर्धारण लागि कार्यक्रम - यो प्राविधिक सिद्ध सहायक खोटरहित ढंगमा functioned हुन चाहने हरेक प्रयोगकर्ता को शस्त्रागार मा एक आवश्यक उपकरण हो। हामी अनुगमन तापमान, हामी समस्या समाधान गर्न सक्छन् जो देखि एक चयन, तपाईं CPU तापमान कसरी थाहा लागि सबैभन्दा लोकप्रिय उपकरण पाँच प्रस्ताव।
1 सगरमाथा - पीसी को एक निदान हार्डवेयर र सफ्टवेयर पूरा लागि डिजाइन अनुप्रयोग। प्रोसेसर, Motherboard, मनिटर र भिडियो सहायक सम्पूर्ण, डिस्क, आदि - उपयोगिता प्रणाली बारे विस्तृत जानकारी दिन्छ प्रत्येक घटक को तापमान बारेमा जानकारी प्रदर्शित बस कार्यक्रम को कार्य को छ।
2. कोर अस्थायी - उपकरण सानो आकार र अतिरिक्त सुविधाहरू कमी विशेषताहरु। कार्यक्रम को मुख्य उद्देश्य - को CPU तापमान नियन्त्रण छ। कोर अस्थायी प्रयोग कुनै पनि आधुनिक प्रोसेसर मा एक अलग कोर तापमान निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। सम्भव उपयोगिता द्वारा वास्तविक समयमा केन्द्रक को तापमान पालन गर्न, र तापमान व्यवहार लोड आधारमा मूल्याङ्कन गर्न। कार्यक्रम सबै आधुनिक प्रोसेसर समर्थन गर्दछ। कोर अस्थायी को एक विशिष्ट सुविधा एक एक्सेल कार्यपुस्तिका मा रिपोर्ट को संरक्षण समय दिइएको अवधिमा तापमान मा रेकर्ड परिवर्तन राखन को संभावना छ।
3. SpeedFan - मुक्त कार्यक्रम वितरण कि तपाईं तापमान, भोल्टेज र प्रशंसक गति निगरानी गर्न अनुमति दिन्छ, प्रणाली एकाइ स्थापित। को CPU तापमान साथै SpeedFan सम्भव बाहिर हार्ड डिस्क तापमान पाउन बनाउँछ। SpeedFan को मुख्य कार्य - यो प्रशंसक गति अनुगमन, साथै यसको परिवर्तन आधारमा घटक को तापमान विशेषताहरु मा। यो सबै हामीलाई प्रोसेसर तापमान कसरी सिक्न, तर पनि पीसी देखि हल्ला प्रणाली एकाइ वा ल्यापटप को पावर खपत कम गर्न कम, साथै मात्र बुझ्न अनुमति दिन्छ।
4 NextSensor। यो स्थापना आवश्यकता छैन कि एक-गर्न-सजिलो प्रयोग उपकरण हो। कार्यक्रम पीसी (सीपीयू / HDD) मा पूर्ण निगरानी तापमान र voltages अनुमति दिन्छ। पनि प्रशंसक गति को अवलोकन द्वारा समर्थित। को अनुज्ञेय मापदण्डहरू अधिक गर्दा उपयोगिता एक बीप emits। उपकरण को एक विशिष्ट सुविधा टाढाको तापमान अनुगमन, साथै धेरै तापमान सेन्सर को समर्थन समर्थन छ।
5 CPUCool - आवेदन CPU तापमान कम गर्न अनुमति दिन्छ। साथै, कार्यक्रम काम प्रक्रिया अनुकूलन गर्न, साथै Motherboard घटक को आधारभूत मापदण्डहरु निगरानी गर्न FSB आवृत्ति परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईं के RAID-एरे थाहा?
जो प्रोसेसर गेमिङ लागि राम्रो छ?
इन्टेल कोर I3 4330 प्रोसेसर सुविधा र समीक्षा
को मास्को Kremlin को प्रधान दूत गिरजाघर। रूसी Tsars को तीर्थ
हेन्ना कपालको लागि। सुन्दर र स्वस्थ उपस्थिति
ओट आहार: स्वास्थ्य सम्झौता बिना राम्रो आंकडा।
निराशाले - एक रोग छ!
Interbank क्रेडिट: यसको सुविधा र आधारभूत सिद्धान्तहरू
पुरानो रूघाँ र snot घाँटी
Marmite: उपकरण कस्तो प्रयोग र के को लागि छ?
अफिसको लागि फूलहरू छान्नुहोस्
Haymakers को रहस्य: कसरी चुल्ठो बन्द लड्न
को Tulip को प्रसार। Tulip प्रजातिहरू। रोपण र हेरविचार
कुकुर हो ... वा बहुमुखी परिभाषा
जो moonshine किन्न राम्रो छ: समीक्षा, विकल्पहरू